အကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အတူကောလိပ်အိမ်ထောင်ဖက် Exploring | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အတူကောလိပ်အိမ်ထောင်ဖက် Exploring
မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ, ဥရောပခရီးသွား
ကောလိပ်ကျောင်းသူငယ်ချင်းများ၏ကုမ္ပဏီအတွက်ခရီးသွားသည့်အခါ, တစ်ဦးခရီးစဉ်ရှိသည်နှင့်မယ့်အလိုအလျောက်ဖြစ်မဿုံအဆင်ပြေထိုသို့. အဘယ်သူမျှမမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူနေရာတစ်နေရာသို့မဟုတ်မည်သည့်ကြိုတင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအလည်ခရီးအမှန်တကယ်ဝှက်ထားသောဘဏ္ဍာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာပျော်စရာနှင့်ဆင်ဆာပိတ်ထားသောဝက်ဆိုက်များပေါ်မှရှာဖွေရေးအတွက်လုံလောက်သောအခန်းကအရွက်. ဒါကြောင့်, သင်သည်အဘယ်သို့စစ်မှန်ရှာဖွေတွေ့ရှိစေလိုတဲ့အခါသင်နှင့်သင့်ရဲ့ buddy ချွတ် tick တစ်တင်းကျပ်ဖို့-do-စာရင်းမလိုဘဲ start ပါဘူးဘယ်မှာ? သင်ဘယ်လိုကွာဝေးရာကိုအကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိရှာတှေ့နိုငျ?
ကောင်းစွာ, သင်တို့အဘို့အကံကောင်း, ဒါဟာအတုအောင်ယခုဖြစ်နိုင် ဗီဇာများအတွက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကြိုတင်မှာယူမှု လေယာဉ်လက်မှတ်သို့မဟုတ်ခရီးသွားလက်မှတ်ခရီးစဉ်အတွက်ပေးဆောင်စရာမလိုဘဲ. သငျသညျတခုခရီးစဉ်မပါဘဲသွားလာခွင့်ပြု. မှတပါး, နည်းပညာမြေပုံများနှင့်လမ်းညွှန်စာအုပ်လေးတွေနဲ့အလွယ်တကူဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, ဒါကြောင့်သင်အပြည့်အဝခရီးသွားအကြံပေးချက်များအဘို့သင့်ဖုန်းပေါ်မှာအားကိုးနိုင်ပါတယ်. ဒီမှာပါ5ကောလိပ်ကျောင်းအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိရှာဖွေစူးစမ်းပိုအကြံပေးချက်များ:
အသစ်ကမြို့၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးနေ့၌ရှာရန်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်. သူတို့ကအလွယ်တကူရှာကြသည် – ကိုယ့်ကိုသင်ပထမဦးဆုံးညဥ့်ဖြုန်းပါလိမ့်မည်ဟိုတယ်အတွက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များကိုမေး, ဒါမှမဟုတ်သင်ကသင်၏ဘော်ဒါဆောင်ထဲတွင်ရှာတွေ့အခြားကျောင်းသားခရီးသွားများအတွက်ထံမှမေးလျှောက်. အင်တာနက်အပေါ်တစ်ဦးအမြန်ရှာဖွေရေးသင်တို့ကိုလည်းကောင်းတစ်ဦးအခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်ကိုကူညီရှာဖွေပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါခရီးစဉ်ကိုအဓိကအားဖြင့်တာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်ကြောင်းမှတ်ချက်, သင်ဘတ်ဂျက်ငွေအနည်းငယ်ချွေတာခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် gu ည့်လမ်းညွှန်များလှည့်လည်ကြည့်ရှု.
မညျသို့လုပျဆောငျအခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်အလုပ်? သငျသညျမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါရက်စွဲနှင့်အချိန်များအတွက်အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်ကိုသင်ရှာတွေ့, သငျသညျ sign up ကို, အစည်းအဝေးအမှတ်သင်တို့ဆီသို့ဆက်သွယ်နေသည်, သငျသညျအချိန်ပေါ်ကြောင်းအချက်မှာပေါ်လာ, ပြီးတော့သင်ဧည့်လမ်းညွှန်မှအရာအားလုံးကိုစွန့်ခွာ. အဆိုပါသြဇာဧည့်လမ်းညွှန်ကိုသင်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူမြို့နှင့်၎င်း၏ဆင်ခြေဖုံးရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီခြင်းနှင့်မြို့တော်ရဲ့တစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းနားလည်မှုရရှိပါလိမ့်မယ် ထူးခြားတဲ့ဗိသုကာ နှင့် ဒေသခံယဉ်ကျေးမှု.
2. သင်ကိုယ်တိုင်ပျောက်ဆုံးသွားသော Get ရန် Allow
အခုတော့တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိဧည့်လမ်းညွှန်ကိုသင်မြို့အများစုအစိတ်အပိုင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးခဲ့တယ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်တစ်ဦးမှာယခုချွတ်ရရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည် ကျပန်းဘူတာရုံ နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်စူးစမ်း. တမင်တကာပု touristy ဒေသများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်လူမျိုး၏ပင်လယ်မှာ "ရှုံးနိမ့်ရ". တဖန်သင်တို့မိတ်ဆွေများကိုနှင့်အတူရှိနေသောကြောင့်, သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်အကျွံစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလို. သငျသညျမရေမတွက်နိုင်သောရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ် ဝှက်ထားသောကျောက်မျက် – အဘယ်သူမျှမခရီးသွားဧည့်အစဉ်အဆက်မတိုင်မီမမြင်စဖူးသောအရာတို့ကို. သငျသညျသူစိမ်းဖို့ပြောနေတာမှပွင့်လင်းလျှင်အဘယ်သူမျှမသင်ပိုကောင်းဒေသခံတွေထက်တစ်မြို့ရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးပါမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ကူညီပေးပါမည်.
3. Google Maps ကိုသုံးပါ
Google မြေပုံများသို့မဟုတ် Apple မြေပုံများ အဆင်ပြေပါတယ်, Apple သည် Google မြေပုံတွင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအနိုင်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း. အများဆုံးအင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည်က Android-powered devices များရှိသည်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်, ဒါအများဆုံး ခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Google ကမြေပုံပေါ်တွင်ပြု. တစ်ဦးဧရိယာ၏ဂူဂဲလ်မြေပုံလေ့လာနေအုပ်စုသည်နယ်လှည့်အဘို့တကယ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ် – ဒါဟာသင့်ပတ်လည်ဘာတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောစိတ်ကူးပေးသည်. Google ကပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များသင်ပြောပြလိမ့်မယ် စားရန်အကောင်းဆုံးသောနေရာများ, ဘယ်မှာရှာတွေ့ အကောင်းဆုံးသောစပျစ်ရည်, နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းခရီးသွားအဖြစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့မဘယ်မှာပေါ်တွင်သင်သတိထား. ဤအချက်အလက်သည်သင်စူးစမ်းနှင့်ပိုပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးသည်.
သင်တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပါဘဲလမ်းတွေပေါ်မှာလှည့်လည်ချင်ကြပါဘူး အကယ်., အဘယ်ကြောင့်ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်ရပ်မတက်? ကုန်သွယ်ရေးဝိုင်းများအတွက်န်းကျင်ကိုမေး, အနုပညာပြပွဲ, ဖျော်ဖြေပွဲ, သို့မဟုတ် ပွဲတော်များ သူတို့ကိုမဆိုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံ. သငျသညျအားကစားကိုချစ်လျှင်, တစ်ကွင်းကိုသွားတစ်ခုသို့မဟုတ်လမ်းဘောလုံးပွဲစဉ်သို့တက်ရောက်ရန်. သူတို့ဧညျ့အလုံအလောက်ရှိပါတယ်လျှင်သင်ဒေသခံတွေနှင့်အတူကစားပင်နိုင်ပါတယ်. ဤသည်ကိုသင်မြို့၏နက်ရှိုင်းတဲ့ရှုထောင့်ပေးခြင်းနှင့်သင်ဒေသခံများနှင့်အတူအပြန်အလှန်နဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ရုန်းကန်မှုများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် – ဒေသခံတစ်ဦးနဲ့တူ. သင်သည်သင်၏အပြေးစွမ်းရည်ကိုယုံကြည်စိတ်ချလျှင်မာရသွန် Run. သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်က ပို. ပင်ပျော်စရာစေမည်.
Facebook ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဘယ်မှာကောလိပ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ backpacking သွားကြဖို့သငျသညျပွောကွလိမျ့မညျ, အဘယ်အရာကိုရှိနေစဉ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်, နှင့်သင်ဦးတည်ရာအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှ. ရုံကောလိပ် join သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုခရီးသွားများအတွက် '' အုပ်စုတစ်စု, Facebook ပေါ်မှာပြောပါ, နှင့်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့အဖွဲ့ဝင်များ၏စိတ်ထဲတွင်ကောက်. social media ပေးထားသောဒေသများအတွက်ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုနှင့်အတူလူထံမှသော့ကိုသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းများအတွက်ရွှေငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏.
ကောက်ချက်ချရန်, နေ့တိုင်းရည်မှန်းချက်ကြီးငယ်ရွယ်ကောလိပ်ခရီးသွားများအတွက်မဆိုအုပ်စုအတွက်သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. ကိုယ့်အဘို့သင့်လျော်သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများ ကျန်းမာရေးနှင့်ခရီးသွားအာမခံ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦး fixed ခရီးစဉ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကန့်သတ်ပါဘူး. သင့်ရဲ့စပ်စုငယ်ရွယ်မိမိကိုယ်မိမိစူးစမ်းလေ့လာကြစို့နဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆောင်းပါးကြိုက်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်မှသင်၏ရထားလက်မှတ်တွေအမိန့် တစ်ဦးကရထား Save.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “အကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အတူကောလိပ်အိမ်ထောင်ဖက် Exploring” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/discoveries-college-mates/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
College CollegeMates Discoveries ခရီးသွား Travelingtips
I amabusiness analyst, andafinancial instructor who has been researching self-development for the past two years and now is off travelling the world. I am alsoamarathon runner and have set running the Great Wall Marathon asalifetime goal! My life mission is to inspire others to live their dreams. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
မီးရထားခရီးသွားလာသြစတြီးယား, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, မီးရထားခရီးသွားလာဂျာမဏီ, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, မီးရထားခရီးသွားလာနော်ဝေ, မီးရထားခရီးသွားလာစကော့တလန်, ဥရောပခရီးသွား